Music | Mysansar Entertainment
गंगनम स्टाइलको रेकर्...
posted by E! MySansar
कोरियाली र्‍यापर PSY को गंगनम स्टाइल म्युजिक भिडियोले शनिबार नयाँ रेकर्ड राखेको छ। जस्टिन बिबरको ‘बेबी’लाई...
Whitney Houston Foun...
८० र ९० को दशकमा एकदमै चर्चामा आएकी अमेरिकी गायिका तथा नायिका ह्विटनी हुस्टनको ४८ वर्षको उमेरमा मत्यु भएको छ।...
MTV Award ma Nango Manchhe
आइतबार बेल्फास्टमा एमटिभी युरोप म्युजिक अवार्ड भइरहेको थियो। टेलिभिजनमा समेत लाइभ प्रसारण भइरहेको त्यो कार्यक्रमका क्रममा अचानक एक जना पुरुष स्टेजमा चढे। पुरुषमात्रै चढेको भए त खासै केही बबाल हुने थिएन होला, तर उसले जिउमा कुनै लुगा लगाएको...
‘Baby’ Gaune Justin ko Baby Janmiyo?
भर्खर १७ वर्ष पुगेका गायक जस्टिन बिबर किशोरकिशोरीहरुमाझ निकै लोकप्रिय छन्। उनलाई सबैभन्दा बढी चर्चित बनाएको ‘बेबी’ गीतले हो। तर यही ‘बेबी’ शब्दले अहिले उनलाई विवादमा तानेको छ। २० वर्षकी एक फ्यानले उनलाई आफूले जन्माएको ‘बेबी’को बाउ...
तपाईँलाई थाहा छ, अहिलेसम्ममा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो कुन हो ? जस्टिन बिबरको भिडियो “बेबी” सबैभन्दा बढी...
Justin ko sathi
बेबी गीतबाट निकै चर्चा पाएका किशोर गायक जस्टिन बिबरको साथी को होला ? भर्खरै उनले आफ्नो ट्विटरमा आफ्ना एक साथीको फोटो पोस्ट गरेका छन्। उनको त्यो नयाँ साथी थियो- बिथोभन, १८ वर्षको ह्वेल माछा। अमेरिकाको एटलान्टाको एक्वेरियममा उनले यो फोटो खिच्दै...